I-Now Word - Ikhasi 6 of 172 - - NoMark Mallett -
Izinganekwane Eziyishumi Eziyinhloko Zobhadane
UMark Mallett uyintatheli eyake yawina imiklomelo nge-CTV News Edmonton (i-CFRN TV) futhi uhlala eCanada.
KUKHONA unyaka ngokungafani neminye emhlabeni. Abaningi bazi ngokujula ukuthi kukhona okuthile kabi kakhulu okwenzekayo. Akekho ovunyelwe ukuba nombono futhi, noma ngabe mangaki ama-PhD ngemuva kwegama lawo. Akekho umuntu osenenkululeko yokuzikhethela ngokwezokwelapha (“Umzimba wami, ukukhetha kwami” akusasebenzi). Akekho umuntu ovunyelwe ukubandakanya amaqiniso esidlangalaleni ngaphandle kokuhlolisiswa noma ngisho nokuxoshwa emisebenzini yakhe. Kunalokho, singene esikhathini esifana nenkulumo-ze enamandla futhi imikhankaso yokusabisa lokho kwandulela ngokushesha ubushiqela obucindezela kakhulu (nokuqothulwa kohlanga) kwekhulu elidlule. I-Volksgesundheit - "Kwezempilo Yomphakathi" - yayiyisisekelo sohlelo lukaHitler. Qhubeka ukufunda →
Isitha singaphakathi kwamasango
LAPHO yisigcawu esiseTolkien's Lord of the Rings lapho iHelms Deep ihlaselwa khona. Kwakufanele kube yisiphephelo esingangeneki, sizungezwe i-Deeping Wall enkulu. Kepha kutholakala indawo esengozini, esetshenziswa amandla obumnyama ngokubanga zonke izinhlobo zezinto eziphazamisayo bese etshala futhi abhebhethekise isiqhumane. Imizuzwana ngaphambi kokuba umgijimi wethoshi afike odongeni ayokhanyisa ibhomu, ubonwa elinye lamaqhawe, u-Aragorn. Umemeza umcibisheli uLegolas ukuthi amhlise… kepha sekwephuze kakhulu. Udonga luyaqhuma futhi lwephuliwe. Isitha manje sesiphakathi kwamasango. Qhubeka ukufunda →
"SO, kwenzekeni nje? ”
Ngenkathi ngintanta buthule echibini laseCanada, ngigqolozele phezulu kohlaza okwesibhakabhaka ngidlule kobuso obufiphele emafwini, lowo bekungumbuzo obuzungeza engqondweni yami muva nje. Esikhathini esingaphezu konyaka esedlule, inkonzo yami yavele yathatha ukuphenduka okungathi kungalindelekile yahlola "isayensi" ngemuva kokuvalwa komhlaba ngokungazelelwe, ukuvalwa kwesonto, imaski mandate, kanye namapasipoti okugoma ezayo. Lokhu kwabamangaza abanye abafundi. Uyayikhumbula le ncwadi?Qhubeka ukufunda →
LAPHO Ngumbhalo oshisayo engqondweni yami kulezi zinsuku, ikakhulukazi ngemuva kokuphothula i-documentary yami mayelana nobhubhane (bheka Ukulandela Isayensi?). Yindinyana emangazayo eBhayibhelini - kepha lena enengqondo kakhulu ngehora:Qhubeka ukufunda →
WONKE kusuka kubefundisi kuya kosopolitiki sekukaningi bethi kufanele "silandele isayensi".
Kepha une-lockdowns, ukuhlolwa kwe-PCR, ukuqhela kwezenhlalo, ukufihla ubuso, kanye "nokugoma" empeleni ubulandela isayensi? Kulokhu kudalulwa okunamandla ngokunikeza umklami umbhali wamaphepha uMark Mallett, uzozwa ososayensi abaziwayo bachaza ukuthi indlela esihamba kuyo kungenzeka kanjani ukuthi ingabi “ukulandela isayensi” nokho… kepha kube yisihlungu esingachazeki.Qhubeka ukufunda →
AS izenzakalo ezingavamile zenzeka embulungeni yonke, kuvamise “ukubheka emuva” esikubona ngokucacile. Kungenzeka kakhulu ukuthi “igama” elifakwe enhliziyweni yami eminyakeni eyedlule manje livela ngesikhathi sangempela… Qhubeka ukufunda →
Posted on Kwangathi 28, 2021 June 8, 2021 by Mark
THE Okumangalisa kakhulu ngeNkosi yethu uJesu ukuthi akazigcineli lutho. Akagcini ngokunika lonke udumo kuBaba, kodwa futhi uthanda nokuhlanganyela inkazimulo Yakhe naye us kuze kube sezingeni lapho siba khona izindlalifa futhi ophathina noKristu (cf. Efe 3: 6).
«Langaphambilini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 172 Okulandelayo »
14	I-Facebook Messenger